Ukuphupha ngeHass Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Inzondo ihlala ibonwa njengokuchasene nothando, ngamanye amaxesha njengesiphumo sothando oluphoxekileyo. Iimvakalelo zentiyo zihlala ziimvakalelo ezinzulu kakhulu ezibonisa ukungamthandi umntu okanye iqela labantu, kodwa kwanezilwanyana.
Ngamanye amaxesha inzondo inokukhokelela kwizenzo ezinobundlongondlongo kwezi zinto zinenzondo. Akunyanzelekanga ukuba ibe kukubulala, ikwanokuthetha uhlaselo oluncinci okanye uhlaselo ngamagama nangezenzo.
Amaxesha ngamaxesha, umntu ekubhekiswa kuye uyazi kakuhle izizathu zoluvo lwabo lwenzondo, njengoko zihlala zibangelwa kukungabikho kokusesikweni okanye ukwenzakala okungathintelwanga okanye kohlwaywe.
1 Uphawu lwephupha «intiyo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «intiyo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «intiyo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «intiyo» - ukutolikwa ngokubanzi
Uhlalutyo lwamaphupha ngokubanzi luhlala lutolika uphawu "intiyo" njengephupha ngokuchaseneyo. Kuba kule mvakalelo yomeleleyo ephupheni uthando okanye uthando lwomphuphi lunokuboniswa kumcimbi othile okanye umntu.
Ukuba umthiyile umntu ephupheni lakho, kuya kufuneka ulumke ekuvukeni ubomi ukuze ungonzakalisi omnye ungaqondanga. Kwakhona, le meko yamaphupha inokuvela. amaxesha okuphumelela Chaza nabahlobo okanye usapho. Ekutolikeni lo mfanekiso wephupha, kunokuba yinto ebalulekileyo ukuba ungathandwa ngubani. Ngaba ngutata wakho okanye unyoko, mhlawumbi unyokozala? Okanye ngaba yayingumphathi wakho okanye umntu osebenza naye?
Ukuba umntu ophuphayo ngokwakhe uyacatshukelwa ngenxa yokungabikho kokusesikweni ephupheni, mhlawumbi kungekudala uza kufumana abahlobo abalungileyo kwaye agcine ubudlelwane obumnandi nabantu abaziyo. Ukuba, kwelinye icala, izizathu zokuthiya kukuziphatha okufanelekileyo, umntu unokuvuka ngelixa evukile. iingxaki lungisa.
Ukuba umntu oleleyo uziva intiyo ngakwiintshaba zakhe ephupheni, uhlala eziva iimvakalelo ekuvukeni kobomi ngokunjalo, kodwa akakwazi ukuzibonakalisa apho. Ukuba inzondo ephupheni ikhokelela kwinzondo okanye ekwahlukaneni, umphuphi uya kuba kungekudala Iingxabano Kunye neengxoxo ezingaphambili.
Ukuba intiyo ijika ibe ngumsindo ephupheni kwaye ungazama nokubulala into eyenzondo, uhlala ujonga eyinyani Imeko yeemvakalelo sebenzisa. Kungenxa yokuba apha kubonakala ngathi kukho imicimbi engasonjululwanga okanye ukungavisisani ekufuneka kusonjululwe ngokukhawuleza.
Uphawu lwephupha «intiyo» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwembono yengqondo, umfanekiso wephupha "intiyo" ufuzisela kwiimeko ezininzi a Ukwelo yokuphupha. Rhoqo amaxesha, abantu abalawulayo nabalawulayo kwi el mundo Abantu abavusayo baphupha loo mxholo, kuba bayazi ubunyani bayo. Ngoku, ephupheni, unokuvumela iimvakalelo zakho zihambe ngokukhululekileyo.
Ukuba umphuphi uziva enezothe ngomntu ephupheni, kunokuba kuhle ukungenisa Ngaphambili, kwakungelula kangako ukoyisa. Ukuba uzithiyile okanye awuzithandi ephupheni lesidlo okanye ipleyiti, iimvakalelo zakho ezingazi nto malunga nomcimbi othile kufuneka ziboniswe kulowo uleleyo.
Ukuzonda kwezilwanyana ephupheni, ezinokuthi zikhokelele ekukhohliseni izilwanyana, zihlala zibonisa eyomeleleyo. Ukuchasana ngokunxulumene nomntu othile. Ubundlongondlongo bunzulu kakhulu kwaye kufuneka buqwalaselwe ngokusondeleyo kwihlabathi lokwenyani.
Ukuba iphupha livakala kwiqela liphela labantu, njengamaJuda, ubutshaba kunye nobutshaba, oku kungakhokelela kungxabano phakathi kwakho. Iindawo zobuntu bonisa okanye ubonise ukwaliwa kweepropathi ezithile.
Uphawu lwephupha «intiyo» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya, iimvakalelo zentiyo zibonakaliswa ngengqondo yemvakalelo ephupheni. umxholo wokomoyaezibaluleke kakhulu kumphuphi kwaye zinokungaziwa ngabanye abantu. Nangona kunjalo, umntu oleleyo kufuneka afunde ukwamkela ukuba kusenokubakho iimbono ezahlukeneyo kwimicimbi yokomoya.